Shirka madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo maanta bilawday - Tilmaan Media
Shirka madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo maanta bilawday
Waxaa maanta si rasmi ah uga furmay caasimadda Dowladda Galmudug ee Dhuusamareeb shirka madaxda shanta dowladood ee xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Dowladda Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-qoor) oo ka hadlayay furitaanka shirka ayaa sheegay in ujeeddada Gogosha ay u dhigeen ay tahay in madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyadu ay uga wada tashadaan hannnaan doorasho ee Dalka oo xor iyo xalaal ah. Qoorqoor ayaa hadalkiisa ku daray in aysan talada Dalku iyaga keliya ku koobnayn balse ay tahay mid baahsan loona baahan yahay wada tashi.
Dhanka kale madaxwaynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa furitaankii shirka ayaa yiri “Shirkaan aan u fadhino waa shaqo ay u qabaneyno madaxda dowladda federaalka, waa dowladahii aad madaxda u aheydeen, waxeyna ka hadlayaan waxyaabo ay rabaan iney idiin fududeeyaan, waxaan ku rajo weynahay doorasho wakhtigeeda ku dhacda, kuna dhacda si nabad ah, natiijo lagu qanacsan yahayna ay kasoo baxdo, dalkana ka gudbo marxaladaan labaad,”.
Madaxda khudbadooda aadka loo sugyay waxaa kamid ahaa madaxwayanaha Jubaland Axmed İslaam “Axmed Madoobe”. İsaga oo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabatay wuuxuu yiri;
“Dowlad Goboleedyada waa qaab dhismeed ka tirsan nidaamka Federaalka, xaqna u leh inay tashadaan, dowladda federaalka mas’uuliyiintoodana talada ayaa ka dhaxeysa oo u baahan qaraarada siyaasiga ee la gaarayo mid laga wada tasho oo la isu yimaado oo la isla qaato meesha la is leeyahay wey gaari kartaa” ayuu yiri Axmed Madoobe”.
Waxaa iyaguna khudbadooda jeediyay madaxwayneyaasha Koonfur Galbeed Cabdicasiis laftagareen iyo madaxwaynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Labada madaxwayne ayaa carabka ku adkeeyay ahamiyada ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho wakhtigeeda kudhacda la,islana ogol yahay.
Shirkaan ayaa lafilayaa in uu kasoo baxo war murtiyeed muujinay mawqifka dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ee ku aadan doorashooyinka dalka.
Bixinta Baasaboorka oo dib loo billaabayo
Wararkii ugu danbeeyey ee debed-baxyada Mali